Facebook Boost & Facebook ဆိုင်ရာ Services များ | Online Service Center Myanmar -->
Facebook Boost & Facebook ဆိုင်ရာ Services များ
Facebook Boost ဆိုတာဘာလဲ....?
ဟုတ်ကဲ့ Facebook Boost လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ Social Network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီး Facebook အသုံးပြုနေသူတိုင်းဆီကို မိမိရဲ့ သိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို အမြန်ဆုံးသိရှိစေဖို့ ကြော်ငြာတဲ့ သဘောပါပဲ Facebook အသုံးပြုသူတိုင်း Sponsored ဆိုတာလေးပါတဲ့ Website၊ Facebook Page၊ Photo၊ Video၊ Post၊ လေးတွေကို မြင်တွေ့ ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် အဲ့ဒါက Boost ပြုလုပ်ပြီးကြော်ငြာထားတဲ့ အရာလေးတွေပါ ရုပ်သံမီဒီယာတွေ၊ သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်သလိုပဲ Facebook မှာ Boost ပြုလုပ်ပြီး မိမိတို့ ရဲ့လုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ Website များ၊ Photo များ၊ Video များ၊ Post များ၊ ရောင်းချချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စားသုံးသူ၊ သုံးစွဲသူ၊ သိစေချင်သူတွေဆီကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ရောက်ရှိသွားအောင် သိရှိသွားအောင် ကြော်ငြာတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံး Facebook Page တွေကိုလည်း လူများများသိအောင် Like များများ တက်လာအောင် Boost လုပ်ပြီး ကြော်ငြာလို့ ရပါတယ်။
Facebook Boost လုပ်တာဘယ်လို အကျိုးရှိလဲ....?
ဘာတွေဘယ်လို အကျိုးရှိစေလည်းဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ မိမိတို့ ရဲ့လုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ Website များ၊ Photo များ၊ Video များ၊ Post များ၊ ရောင်းချချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စားသုံးသူ၊ သုံးစွဲသူ၊ သိစေချင်သူတွေဆီကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ရောက်ရှိသွားစေပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံး Facebook Page တွေကိုလည်း Like အရေအတွက် အမြန်တက်လာစေပါတယ် ဒါကတော့ Boost ပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ ကျေးဇူးတွေပါပဲ။
Facebook Boost လုပ်ရင် ကြော်ငြာက ဘယ်လိုပေါ်လဲ....?
အထက်ပါအတိုင်း ပေါ်ပါတယ် ဒါကို Mobile Phone နဲ့ သုံးနေရင်း Computer နဲ့ သုံးနေရင်း သတိထားမိ
Facebook Boost လုပ်ချင်တယ် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ....?
Boost ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် Plan တွေများစွာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြပါတယ်။
တစ်ချို့Post Reach ( ကြည့်ရှုသူ အရေအတွက် ) အနည်းဆုံး ၇၅၀၀၀ ကနေ အများဆုံး ၁၃၀၀၀၀ ရစေရမယ် ၇၅၀၀၀ ကျပ် ( ယခင် ဒေါ်လာဈေးမတက်ခင်ကနှုန်း ) ကျသင့်ပါတယ်ဆိုပြီး အဲ့ဒီနှုန်းနဲ့ 
ယူဆောင်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ Post Reach အနည်းဆုံး
၇၅၀၀၀ ကနေ အများဆုံး ၁၃၀၀၀၀ ဦးရေ ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းထက် ပိုမို သာလွန်တဲ့ Post Reach ကို
ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ သူများတွေ ၇၅၀၀၀ ကျပ်ယူနေချိန်မှာ ကျွန်တော်က
၃၀၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ပဲ Boost Services ပေးခဲ့ပါတယ်။
Boost ပြုလုပ်ချင်ပေမယ့် Boost Services ပေးနေတဲ့သူတွေ ယူတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကြည့်ပြီး လက်တွန့် 
သွားကြသူ များစွာရှိပါတယ် အမှန်တကယ်တော့ Facebook Boost ပြုလုပ်ရတာ အင်မတန်မှ
လွယ်ကူပါတယ် လုပ်တတ်ရင် အလွယ်လေးပါ ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ဖို့ အနည်းငယ်လောက်ပဲ
လေ့လာမှုပြုလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ချင်ဘူး(မပြုလုပ်တတ်ဘူး) ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်ရဲ့ Online Services Center ကနေ အကောင်းဆုံးနဲ့ အသက်သာဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီ
ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်လို့ဘာဆိုဘာမှမသိလို့Boost လုပ်တာကို ဈေးကြီးပေးပြီး လုပ်ခဲ့
ကြသူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အပ်နှံပြီး အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေထက်
ထက်ဝက်မက ပိုမို သက်သာစေတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့ Post Reach တွေ Like တွေကို
ကိုယ်တွေ့ ခံစားသိရှိနေဖို့လှမ်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆီမှာကတော့ Plan - ၃ ခုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
၁ ပတ်စာ(၇ ရက်) Boost -
USD $30.00 ( ဒေါ်လာ ၃၀ )
၂ ပတ်စာ(၁၅ ရက်) Boost -
USD $50.00 ( ဒေါ်လာ ၅၀ )
၁ လစာ(၃၀ ရက်) Boost -
USD $100.00 (ဒေါ်လာ ၁၀၀)
( အထက်ဖေါ်ပြပါ USD အစား ကာလပေါက်ဈေးအတိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည် )
Boost Services ပေးခြင်းနှင့် ကျွန်တော်၏၀န်ခံချက်...
အမြတ်ကြီးစားပြီး မတန်တဆဈေးတွေနဲ့ Boost ပြုလုပ်ပေးနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်
Boost ပြုလုပ်လိုလျင် ဒါလေးတစ်ခုတော့ သိထားပေးပါ ကျွန်တော်ဆီကို ငွေကို ဘဏ်ကနေ
တိုက်ရိုက်လွှဲပေးရပါမယ် Bank Account ရှိပါတယ် သို့ ပေမယ့် Boost လုပ်တဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေ
တွေကို သီးသန့်အသုံးပြုမှာဖြစ်သည့်အတွက် တိုက်ရိုက်လွှဲခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ဖက်က
ငွေလွှဲလိုက်လို့ဘဏ်က ဆက်သွယ်လာပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ငွေသွားထုတ်ပြီးတာနဲ့ 
Boost ကို ချက်ချင်းပြုလုပ်ပေးသွားပါမယ် ဘဏ်မှာ ငွေသွားလွှဲတဲ့အခါမှာ ဟိုဘက်က လက်ခံ
ဖြတ်ပိုင်း ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် အဲ့ဒါကို သိမ်းဆည်းထားပါ ကျွန်တော်မဟုတ် မမှန်တာလုပ်ခဲ့လျှင်
တရားဥပဒေအရ တရားစွဲ အရေးယူနိုင်ရန်အတွက်ပါ။
အခြား Boost Services ပေးနေသူတွေ ယူတဲ့ဈေးနဲ့ ကျွန်တော်ယူတဲ့ဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး ရလာဒ်ပိုများတာကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်က တစ်နပ်စားမလုပ်ပါဘူး Boost လုပ်တာ အမှန်တကယ်တော့
မခက်ခဲပါဘူး လွယ်လွယ်လေးပါ ဒီအပေါ်မှာ မသိနားမလည်သူတွေအပေါ်မှာ
မတန်တဆဈေးတွေတောင်းပြီး Boost ဆားဗစ်ပေး
နေသူတွေများနေလို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပြေ သက်သက်သာသာနဲ့ 
Boost လုပ်နိုင်အောင် ဒီ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မှန်သောစကားဆိုရလျှင် ကျွန်တော် တစ်နပ်စား ဘယ်တော့မှ လုပ်မစားဘူးဆိုတာပါပဲ။
Facebook Page ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်း...
ဒါကတော့ ထပ်တိုး Services ပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook Page ကို Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းလိုလို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သို့ ပေမယ့် တစ်ချို့ တွေမှာတော့ မည်သို့ မည်ပုံပြုလုပ်ရမည်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး တစ်ချို့ ဆိုရင် Page တော့ ဖွင့်တတ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလည်း ဥပမာ စီးပွားရေးအတွက် သို့ မဟုတ် သတင်းအတွက် နည်းပညာအတွက် ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ဆိုပြီး Page တော့ ဖွင့်ထားပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုရမလည်း ဘယ် Tools တွေသုံးပြီး ဘာတွေလုပ်ရမလည်း ဆိုတာတွေကို မသိကြတဲ့ သူတွေလည်း များပါတယ် တစ်ချို့ ကျတော့ Online ကို အသုံးမပြုကြတဲ့သူတွေရှိတယ် ဒါပေမယ့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် Facebook မှာ Page ဖွင့်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ သူတွေရှိတယ် အဲ့ဒီလို လူတွေအတွက် Facebook Page ဖွင့်ပေးတာရယ် Page တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရလည်းဆိုတာတွေကို သင်ကြား ပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အင်တာနက်မသုံးတတ်ဘူး ကုမ္ပဏီအတွက် ထုတ်ကုန်အတွက် သို့ မဟုတ် Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းဆီကို အသိပေးချင်လို့Page ဖွင့်ပြီး အဲ့ဒီ Page ကနေ လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေ ထုတ်ကုန်အကြောင်းတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် တင်ပြီး အသိပေးချင်တယ် ကိုယ်တိုင်က internet မသုံးလို့လုပ်ချင်ပေမယ့် မလုပ်တတ်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Page ဖွင့်ပေးပြီး အဲ့ဒီ Page မှာ ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar မှ Admin ယူထားပြီး တင်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အမြဲတမ်း တင်ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ၀န်ဆောင်ခတော့ ပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် Website တင်ဖို့Facebook Page မှာ Update တင်ဖို့ ကို IT ပိုင်း တာဝန်ယူဖို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခေါ်ခန့် လျှင် လစဉ် ပေးရမည့် လစာထက် ၅ ပုံ ပုံရင် ၄ ပုံလောက်မက သက်သာသွားစေပါလိမ့်မယ်။ အင်မတန်မှ သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ညှိုနှိုင်းပြီး အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ... ဘယ်လို Page မျိုးဖွင့်ချင်လည်းဆိုတာ အောက်မှာကြည့်ပြီး ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
ကဲ... ကိုယ်က ဘယ်လို Page အမျိုးအစားဖွင့်ချင်လည်း ဘယ်လို ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ သဘောကျလည်းဆိုတာ
စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့OSC-Myanmar ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ဆက်သွယ်ရန် - 09421157911, 09794426154, 09253351244